အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှ၊ သင်၏အက်ပလီကေးရှင်း၏ဘက်ထရီ လျော့နည်းနှင့်ကြာရှည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းသည်ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သည်။ အသုံးပြုခြင်းဖြင့်ဘက်ထရီသည်ကုန်သွားပြီဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့စိုးရိမ်ရန်မကြောက်သင့်ပါ။
ကျွန်တော်ကြောင်း၏ကြာချိန်သတိထားမိပါက ဘက်ထရီကအရမ်းတိုတယ် နောက်ပြီး iPhone သို့မဟုတ် iPad နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဟာအချိန်တိုတိုလေးအတွင်းအဆင်ပြေပါတယ် တရားဝင်နည်းပညာဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုကိုဆက်သွယ်ပါ စက်ရုံတွင်ချွတ်ယွင်း။ ၎င်းကိုပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည့်အတွက်၎င်း၏အခြေအနေကိုစစ်ဆေးရန်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်အာမခံချက်ရှိပါကကျွန်ုပ်တို့လည်ပတ်ရန်မှာမဖြစ်မနေလိုအပ်သည် ဖြစ်၍ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့အားမည်သည့်အရာမျှကုန်ကျမည်မဟုတ်ပါ၊ ရေရှည်တွင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအကျိုးပြုလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ဤကိစ္စသည်သင်၏ကိစ္စဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုသောနေရာတွင်ထုတ်ဝေသောဆောင်းပါးကိုယခင်ကဖတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည် အာမခံချက် ဘက်ထရီ။
အထက်ဖော်ပြပါ post ၌, ကျနော်တို့ကအာမခံချက်အောက်မှာရှိနေသော်လည်းဘက်ထရီကိုအစားထိုးအကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်, က Apple ရဲ့အခြေအနေများနှင့်မကိုက်ညီပါကငြင်းပယ်လိမ့်မည်အကြောင်း, အားသွင်းသံသရာ သူမ၏၏ဖြစ်ရပါမည် 80% နှင့် 100% အကြား နှင့်သင်သင်တန်းမတိုင်မီမလာကြဘူး အခြားမည်သည့်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှု။
3.1 App တစ်ခုကိုထည့်သွင်းခြင်း
3.2 ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac တွင် iBackupbot ကိုထည့်သွင်းခြင်း
Un သံသရာအားသွင်း ဘက်ထရီ ၁၀၀% ပြည့်ပြီးတဲ့အခါတစ်ခုတည်းအားသွင်းအားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ များစွာသောအားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ နံနက်ခင်းကို ၁၀၀% ဘက်ထရီနဲ့စတင်ပြီးနေ့လည်ခင်းရောက်ရင် ၅၀% ကျန်တော့မယ်။ လုံးဝ။ ကျနော်တို့တစ်ဝက်တစ်တာဝန်ခံသံသရာထွက်သယ်ဆောင်ကြလိမ့်မည်။ ညအချိန်တွင် ၅၀% ကျန်သည့်အခါ၎င်းကိုအားသွင်း။ ပြန်ပြည့်လာလျှင်၎င်းကိုအားပြည့်သည့်အချိန်တွင်ဖယ်ရှားပါကကျွန်ုပ်တို့သည်အပြည့်အ ၀ အားသွင်းစက်လည်ပတ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ နေ့လည်ခင်းတွင် ၅၀% နှင့်ညဘက်တွင် ၅၀% သည်စုစုပေါင်း ၁၀၀% ရှိသည်။
တရား ၀ င်တရားဝင်မှာကျွန်ုပ်တို့၏စက်များမှာဘယ်လောက်အားသွင်းသံသရာရှိသလဲဆိုတာကိုတိတိကျကျမဖော်ပြနိုင်သော်လည်းသိပ္ပံနည်းကျတွက်ချက်မှုများရှိပါတယ် iPhone အတွက်အားသွင်းသံသရာ ၅၀၀ ခန့်နှင့်အိုင်ပက်ဒ်သက်တမ်းအပြည့်အဝအားသွင်းစက် ၁၀၀၀ ခန့်ရှိသည်။ ကျနော်တို့ပြောခဲ့သလိုပဲသူတို့ဟာ Apple ရဲ့တရားဝင်အချက်အလက်မဟုတ်ပါ၊ သူတို့ကကိစ္စအတော်များများကိုလေ့လာပြီးနောက်လုပ်တဲ့ခန့်မှန်းချက်တွေပါ။
အထက်ဖော်ပြပါအရာအားလုံးကိုဖတ်ပြီးနောက်သင်၏ဘက်ထရီအခြေအနေနှင့်၎င်းတွင်အားသွင်းသံသရာမည်မျှရှိသည်ကိုသင်သိချင်သည်မှာအလွန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်နည်းလမ်းနှစ်နည်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ပထမနှင့်အရိုးရှင်းဆုံးသည်တပ်ဆင်ခြင်းဖြစ်သည် အခမဲ့ app ငါတို့အတွက် iOS ထုတ်ကုန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအခြေခံကျသောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးသည်။ သို့သော်အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊aကိုတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သောအခြားပြည့်စုံသောရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှိသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac (သို့) Windows ရှိ app ကို.
ပထမဆုံးလုပ်ရမှာကရိုက်ထည့်ပါ အပ္ပလီကေးရှင်းစတိုး ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone သို့မဟုတ် iPad မှဖြစ်သည်။
တစ်ပြိုင်နက် Battery Life ဟုခေါ်သောအက်ပလီကေးရှင်းကိုရှာပါမည်။ အလားတူအမည်များများစွာရှိပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားမှားယွင်းစေနိုင်သောကြောင့်၎င်းကိုရှာဖွေသောအခါအလွန်သတိထားပါ။ လုံးဝပါပဲ အခမဲ့။ အောက်တွင်သင်ကြည့်နိုင်သည်။
ကျွန်တော်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးပါက ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ကြည့်ပါ။ ဤရာခိုင်နှုန်းသည်ဘက်ထရီအခြေအနေကို၎င်း၏ကန ဦး အခြေအနေနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ပစ္စည်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထုတ်ကုန်ကို ၀ ယ်သည့်အခါရှိခဲ့သည့်အခြေအနေနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၉၃% ရှိသည်။
အဲဒီမှာ ၉၃% ဟာဘယ်လောက်ညီသလဲဆိုတာကိုတွေ့နိုင်တဲ့အရင်ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ဘားတစ်ခုကိုပြလိမ့်မယ် 1600mAh မှ 1715mAh ငါကန ဦး ခဲ့အရာဖြစ်ခဲ့သည်။
အောက်ကဘားကအဲဒါကိုရည်ညွှန်းတယ် လက်ရှိတာဝန်ခံအဆင့်ကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိရိယာ၏။
ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း၎င်းသည်အလွန်အခြေခံကျပြီးရိုးရှင်းသော application တစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဘက်ထရီ၏အခြေအနေကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီသိရှိနိုင်ရန်လိုအပ်သောအချက်အလက်များကိုပေးသည်။ ငါတို့အရင်ပြောခဲ့သလိုပဲငါတို့ထပ်ပြီးသွားပြီးဘယ်လောက်ပြီးစီးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်တယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac တွင် iBackupbot ကိုထည့်သွင်းခြင်း
ပထမဆုံးလုပ်ရမှာကအောက်ပါလင့်ခ်မှဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ Mac အတွက် iBackupbot ကို download လုပ်ပါ. Windows အတွက် iBackupbot ကို download လုပ်ပါ။
နောက်တစ်နေ့ခြေလှမ်းအလိုတော် ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone သို့မဟုတ် iPad ကိုကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်ပါ လျှပ်စီးကြိုးမှတဆင့်။ ကျွန်ုပ်တို့ဆက်သွယ်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက် app သည်ကိရိယာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးအောက်ပါအတိုင်းပေါ်လာလိမ့်မည် - (1)
ပြီးရင်ငါတို့လုပ်ရမယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ကိုသွားပါ (ကျွန်ုပ်၏ကိစ္စတွင် iPhone) နှင့်၎င်းနှင့်ပါတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်များသည်ပုံတွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းပေါ်လာလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ကိုနှိပ်ပါ "ပိုမိုသိရှိလိုပါက"(2) ။
ကျနော်တို့အဲဒီမှာဝင်သည့်အခါအခြားအချက်အလက်များအကြား, ငါတို့ဘက်ထရီ၏ status ကိုတွေ့မြင်ဘယ်မှာအောက်ပါဝင်းဒိုးပေါ်လာလိမ့်မည်။
status: ယေဘုယျစည်းကမ်းချက်များ၌ဘက်ထရီ status ကို။
ပေါ်လာသောဒေတာနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားမှတ်ချက်ရေးရန်တွန့်ဆုတ်မနေပါနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သင့်အားကူညီနိုင်လိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iPhone ကို » သင်ခန်းစာများနှင့်လက်စွဲစာအုပ် » ဤရိုးရှင်းသောအဆင့်များဖြင့်သင်၏ဘက်ထရီအခြေအနေကိုမည်သို့စစ်ဆေးရမည်နည်း
အဘယ်သူမျှမထောင်၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည်။ cidya တွင် app ((ငါဆုတ်ခွာရသော) app သည် Mac ကိုမလိုအပ်ဘဲသတင်းအချက်အလက်များစွာပေးနေသည်။ သို့သော်ယနေ့ထောင်ဒဏ်မှာအဓိပ္ပါယ်မရှိပါ
ငါက Mac သုံးစွဲသူဖြစ်ပေမယ့် Macbook ကဆုံးသွားပြီ၊ ဒါ့အပြင် system တစ်ခုတည်းမှာတစ်ခုခုတပ်ဆင်စရာမလိုဘဲသင့်ကိုပြောတဲ့ option တစ်ခုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာငါမှတ်မိသေးတယ်။
hard disk မှပင်စုစုပေါင်း mA နှင့်ပိုပြီးသတင်းအချက်အလက်
ကျွန်ုပ်၏ ၁၀.၅ လက်မ Ipad တွင်ဤအရာသည်ဖော်ပြသည်။
အခြေအနေ - အောင်မြင်မှု
ငါ FullChargeCapacity အတွက်သံသယရှိသည်။ ကောင်းပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ငါအတူတူပါပဲရဒါကြောင့်ငါကခန့်မှန်း ... ‍♀️
ဟယ်လို။ FullChargeCapacity 100 တူညီတဲ့ဒေတာ
iPad Pro 11 (2018) တွင်
watchOS4တွင် "Now Ringing" အလိုအလျောက်ဖွင့်ခြင်းကိုတားဆီးရန်
FCC မှအက်ပဲလ်အားအိုင်ဖုန်းဖြင့် FM ရေဒီယိုကိုပြန်လည်သက်ဝင်စေလိုသည်